Baako iskujira Duofold®
Duofold ® Baako iskujira
Duofold isku daraa ee sifooyinka ugu wanaagsan ee, caag ah sanduuq-fasalka cad oo paperboard in ay soo saaraan xirmo si dhab ah kala muuqaal ah. Isku labadan muhashada duwana u oggolaanaysa in qaar ka mid ah naqshado dhismaha aad u gaarka ah, halka bixinta laba dareenkaa u muuqaal, textural iyo taabashada kala.
Jilicsan hooshooda ® dhaliyay film adag waxaa loo isticmaali karaa si ay u abuuraan darfaha sanduuq caag badan ama in ay daaqado in duub khadadka score agagaarka badan, saamaxdo aragti fog weyn in caadiga ah kartoon paperboard windowed. Waa maxay more, filimka adag ku darayaa daacadnimada iyo xoog, jidaynayey daaqadaha inta ka badan waxaa suurtagal ah la isticmaalayo suuqa kala film khafiifa.
Oo saameyn weyn shelf, isku darka wax kasta oo kabayso, flexo iyo / ama daabacaadda silkscreen, oo lagu daray Gurdanka bireed iyo qurxinta saamaynta kale oo gaar ah, ayaa lagu dabakhi karaa mid caag ah ama darfaha paperboard, ama labadaba.
Daawo Video Duofold